Mmetụta nke Ụwa nke DevOps, ITIL & Agile - School ITS Tech
Imetụta Ụwa nke DevOps, ITIL & Agile
Mgbanwe bụ arịrịọ nke ụbọchị ahụ, ugbu a ka ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla, ọganihu nke azụmahịa na mgbanwe ọhụrụ na-agbanwe. Ndị na-ahazi na ndị ahịa na-elegara ndị na-eweta ọrụ IT ka ha nwee ike ịzaghachi ma na-ebute mgbanwe ndị ọrụ na-agbanwe agbanwe mgbe nile, nke na-eweta ọrụ ndị na-eme ka azụmahịa ahụ bụrụ ihe na-akpali akpali karị. ITIL bụ eziokwu zuru ụwa ọnụ maka ịhazi na ilekọta ihe ọhụrụ dịka ọrụ maka azụmahịa. Deft bụ usoro maka ngwa ngwa na mmepe nke ngwa (iji usoro na usoro, dịka ọmụmaatụ, Scrum). DevOps bụ ozizi ma ọ bụ usoro maka ịrụ ọrụ nke nwere ike ịnakwere uru ndị ọzọ dị ịrịba ama na ngwa ngwa ngwa site na nzụlite ndị dị otú a.
DevOps na-ekpuchi akụkụ ka ukwuu nke usoro ndụ ndụ nke ITIL. Ọganihu ngwa (Agile) na-ejikọta usoro ọrụ ITIL site na ịgagharị ọrụ. Nlekọta ngwa na-agafere akụkụ ka ukwuu nke usoro ndụ ndụ ITIL. Mgbe ọrụ ọrụ na-amalite na ndepụta ọrụ site na mgbanwe agbanwe agbanwe agbanwe.
DevOps bụ "nkwanye ùgwù gụnyere" ụzọ e si emeso mmepe Agile na-ekwenye:
Njikọ na-emegidesi ike na njikọ aka nke arụmọrụ dịgasị iche iche na mmepe mmepe dị iche iche na-etolite site na mmepe ndụ ndụ
Njikọ nke arụmọrụ dị iche iche na-aga n'ihu nke oge dịka a na-ahụ anya n'etiti nkọwa nke ọhụụ na ikikere maka ndokwa ọrụ
Ọrụ ndị dị iche iche na-arụ ọrụ na nyocha na ngwa ngwa maka ọrụ na ndụmọdụ banyere ọdịda atụmatụ atụmatụ ahụ
Mmeghari nchịkọta dịwanye mma n'ụzọ dị otú a na-enye ohere ọsọ ọsọ na ahịa nke mgbanwe ọhụrụ bara uru ma ọ bụ nke bara uru
Mee ka mwepụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ dị ọhụrụ, ihe nkwụsịtụ dị iche iche na oge nkwụghachi ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na enwere ndakpọ olileanya
Ngwa nke ntinye ọrụ iji mee ka usoro "usoro," dịka ọmụmaatụ, ngbanwe mgbanwe ma ọ bụ nkwụsị ịme ihe
Echiche ndị a nke imekọ ihe ọnụ, nkwalite akwụkwọ ozi na nzaghachi azụmaahịa adịghị esite na ITIL. N'ezie, usoro ITIL na-elekwasị anya na mkpa maka ntinye nchịkwa nke njikwa na njikwa ngwa ngwa bara uru n'oge ọrụ ọrụ, atụmatụ ọrụ na ọrụ na-agagharị. ITIL bụ ihe doro anya na ịrụ ọrụ arụmọrụ-nkà na ụzụ dị iche iche-kwesiri ịnye ọkwa na mbido na ngalaba mmepe na nkwado na ọdịmma nke ngwa ahụ na ọnọdụ ndụ. Ha kwesiri ka ha nye onyinye na ngwa ahia maka "nkwekorita oru," gunyere injinia oru, ntinye ngwa oru, hazie nkwekorita, ntinye data, data engineering et cetera.
Ike nke isonye agha
Ndị na-arụ ọrụ nchịkwa (na-ahụ maka usoro ndụ dum nke ngwa niile-ọ bụghị naanị ndị e kere n'ụlọ) kwesịrị ka ekpochi ya n'oge kwesịrị ekwesị n'oge ndụ. Eziokwu ka a gwara ha, ha kwesịrị ịbụ ndị na-arụ ọrụ na azụmahịa ahụ, onye ahụ kwadoro dị ka onye isi ahịa azụmahịa (BRM) na onye nwe ụlọ ọrụ iji mara, mara ma dekọọ usoro "ọrụ" niile dị mkpa ma jide n'aka na ejidere ha. na nkwekọrịta ọrụ maka ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ gbanwere ọrụ.
Dika egosiri nke ITIL gosiri, ndi oru nyocha oru kwesiri ijikota aka na mmepe bunyere ndi ozo n'agbata ozi oru na ije ozi na ebughari ngwa ngwa na iziputa ngwa nke bu otu nkwekorita oru. Ọ bụ ezie na nlimble mmepe na-adabere na ngwa ngwa mmepe crosswise n'elu atụmatụ ọrụ na ije ozi, njikwa ngwa na-eji ngwa n'elu usoro ndụ dum site na usoro site na depụta ma na-akpali (na-arụ ọrụ na mmepe) na na-arụ ọrụ na mgbanwe na-adịghị. Ụzọ a na-eme ka o doo anya na ndokwa ọrụ (nke nwere ngwa ahụ) na-ezigara nke ọma nakwa dị ka na-arụ ọrụ n'ime arụ ọrụ iji kwado okwu nke ndị ahịa ahịa na ndị ahịa.
Dị ka DevOps, ITIL na-ejikwa ịnụ ọkụ n'obi eme ihe banyere "ụdị" na iji ngwa ọrụ iji gbasaa arụpụta ihe, igbu ngwa ngwa na ọnụ ala. Ihe ITIL na-enye nsogbu, ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ na ọ dị irè, onye na-ahụ maka ndị ọrụ IT ga-ebu ụzọ mee usoro na ịhazi usoro tupu ya enwee ike ịghọta oke uru nke kọmputa. A ghaghị ịkọ akụkọ ma ọ bụ ịkwụsị "ngosi" ahụ ma kọwaa ya, a ghaghị iwepụ "ihe ndị ahụ", a ga-edozi usoro na mmekọrịta ya ma mee ya. N'ebe ahụ kpọmkwem, a ga-arụzu uru dị ukwuu.
O doro anya na ITIL bụ ụlọ ọrụ kachasị mma maka IT. Ọ bụrụ na ọ nwere ike, ndị na-ahụ maka ọrụ Ịntanetị ga-enwetara uru ma kwadoo mmekorita nke kachasị mma-gụnyere Agile na DevOps-nke gosipụtara ịkwalite ndokwa na azụmahịa na onye ahịa, bulie àgwà na mkpochapụ nke ọrụ IT, welie mmepụta nke ebufe, na ọnụ ọgụgụ isi nke IT.
Iji nọgide na-aghota ihe a, lee anya, The Intersection of DevOps na ITIL®.